Ndege Yakakwirira, naJohn Gillespie Magee Jr. Makore makumi manomwe neshanu yenhetembo yeAirmen. | Zvazvino Zvinyorwa
John Gillespie Magee Jr. Aive nemakore gumi nemapfumbamwe paakanyora nhetembo iyi muna Nyamavhuvhu 1941. Akafa nguva pfupi yapfuura, muna Zvita wegore rimwe chetero. Kwemakore makumi manomwe nemashanu Ndege Yakakwirira zvave zviripo, zviripo uye sezvingabvira zvichave zvinodikanwa zveairmen pasirese. Uye diki diki renhetembo. Zvakakodzera kuyeuka.
Kazhinji ane rufaro uye pfungwa yerusununguko kuti kubhururuka kunogona kuratidzwa zvakanakisa. John Gillespie Magee akawana kurudziro panhandare yekudzidzira apo chirevo "bata kumeso kwaMwari" chakasvika mupfungwa. Ndege Yakakwirira vakapedzisira vava kuita kunge rwiyo, iri chokwadi nhetembo yepamutemo yeRCAF (Royal Canadian Air Force) uye RAF, kubvira pakafa Magee paivhu reBritish. Uye yakaverengerwa, kuitwa, kufuridzirwa, uye kushandiswa kakawanda.
Ndiani John Gillespie Magee?
John Gillespie Magee Jr akaberekerwa muShanghai muna 1922 kuvabereki mamishinari. Baba vake, Reverend John Gillespie Magee, aive weAmerica uye amai vake vaive veBritish. Akadzokera kuUnited States muna 1939 ndokuwana mubhadharo kuYale, asi munaGunyana 1940 akanyoresa muCAA uye akapedza kudzidza semutyairi wendege.
Akaendeswa kuUK kunopedzisa kudzidziswa kwake uye akazove chikamu cheRCAF Combat Squad No. 412, yakavakirwa muDigby, England. Paakanyora nhetembo, akatumira kopi mutsamba kuvabereki vake. Akavaudza kuti: «Ndiri kukutumirai mamwe mavhesi andakanyora rimwe zuva. Zvakaitika kwandiri pamamita makumi matatu, uye ndakazvipedza ndangomhara.
Magee akafa mwedzi mitatu chete gare gare uye mazuva matatu chete mushure mekunge United States yapinda muhondo. Paaive achibhururuka Spitfire yake pakukwirira kwemamita mazana mana, akabatana mumakore nemumwe murayiridzi ndege. Mukuferefeta kwakazotevera, mumwe murimi akataura kuti akaona mutyairi weSpitfire achitambudzika kuvhura uye kusvetuka achibuda muchikepe. Akabudirira, asi ave padhuze nepasi, parachuti haina kuvhura nenguva uye Magee akafa ipapo. Mutyairi weimwe ndege akafawo.
Magee akavigwa mu Holy Cross Cemetery, muScopwick (Lincolnshire), England. Y akanyorwa paguva rake ndiwo mavhesi ekutanga neokupedzisira e Ndege Yakakwirira.
Dudziro uye yekutanga kurira
Hakuna shanduro dzinoti "mukuru" muchiSpanish, asi izvi zvinogona kuve zvekufungidzira uye zvemahara zvandakazvitendera kuti ndiite. Eheka, iyo cadence yeChirungu inorasika kana ichidzokororwa, asi kunaka kwechinyorwa kunoramba kuripo. Musoro iwoyo ndiwo unotambura zvakanyanya kubva pakurasikirwa uku. Nhunzi huru o Chikamu chepamusoro isingatendisi zvachose kana ichienzaniswa neiyo sonorous Ndege Yakakwirira pakutanga
Ah! Ini ndakazvibvisa kubva kumahombekombe ePasi ndikatamba ndichitenderera kumatenga nekuseka mapapiro esirivha.
Ini ndakakwira ndakananga kuzuva, uye ndakabatana nemufaro wemakore akayambuka nechiedza charo - uye ndaita mazana ezvinhu zvausina kumbobvira warota nezvazvo - ndatendeuka, ndamuka uye ndayera ipapo kumusoro, murunyararo runopenya.
Ndichibhururuka nepadenga, ndadzinganisa mhepo inopururudza uye ndakafambisa ndege yangu ine shungu nemipaseji yemhepo isingaperi ...
Ikoko, uko mudenga repamusoro uye rine moto ini ndakasvika nyore nyore uye nenyasha kumatunhu akakwirwa nemhepo uko kwainge kwambosvika gondo negondo.
Uye apo pfungwa dzangu dzakasimuka chinyararire ndakapfuura pakakwirira uye pasingachinjiki utsvene hwenzvimbo, ndakatambanudza ndikabata kumeso kwaMwari.
Mukuvhara, wedzera kuti kubudirira kwaMagee mushure mekufa kwaive kwakawedzera. Sezvatakataura, iyi nhetembo yakava rwiyo, mucherechedzo uye unenge munamato wevatyairi vepasi rese. Gare gare zvakare kune vanoongorora. Michael Collins akatora kopi akaenda naye pane yake nendege nendege kuGemini 10 mishoni.
Chave chiri sosi yekurudziro yezvimbo zvemimhanzi zvakare uye zvave zvichishandiswa pazviitiko zvakawanda zvese mu cinema, theatre kana zviitiko zvepamutemo. Mu cinema yanga iri pamiromo kubva, semuenzaniso, Orson Welles kune iye weiye mudiki kwazvo Russell Crowe, uyo akanyatsoridza Mutyairi weHondo Yenyika II akamira muCanada mumutambo wehondo wa1993 unonzi Tense mira. Ehe, mukuru akakurumbira weSpanish aive chinzvimbo uye faira muzuva rake. Muchiitiko ichi, uye kunyanya muzwi rake uye paudiki, nhetembo iyi inonzwika nezvose zvinoreva uye nekunzwa kwakapihwa nemutyairi chaiye. Mutyairi wendege uyo akabhururuka nekusingaperi nekukurumidza.
Tense mira (Kwekanguva) naAaron Kim Johnston, 1993.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Ndege Yakakwirira, naJohn Gillespie Magee Jr. Makore makumi manomwe neshanu yenhetembo yeAirmen
Ndatenda Mariola nezvenyaya idzi dzinonakidza. Ini ndinoreurura kuti ini ndanga ndisingazive nezve nhetembo iyi nenyaya yayo, hongu ndaona iyo firimu yaunotora naRussell Crowe, asi ikozvino ndaisa zvese zviri muchirevo.
Kwete ndatenda. Maakaunzi kuna master gunmith isu atoziva ...
Iyo inosuruvarisa uye inonakidza nyaya. Ndakanga ndisingazvizive. Uye ini ndaisaziva iyo Russel Crowe bhaisikopo futi. Ini ndinofungidzira ichave iri rake rekutanga mabasa kana isiri yekutanga. Ndakagovana chinyorwa chako pane yangu Facebook madziro. Murombo mukomana. Haana kukodzera magumo akasiririsa. Raki rakaipa raakange ave naro. Uye zvakare mumwe mutyairi, hongu.
Unogamuchirwa. Ndatenda zvikuru kune iyi link. Hongu, ndichamira naye.
Kana uchikwanisa, shanyira Asturias uye Oviedo. Uchachifarira.
Muchokwadi, ndine shungu neHondo Yenyika Yechipiri. Kune akawanda mashoma kana asina kuzivikanwa uye anonakidza episheni eiyi hondo yekurwa.
Kumbundira nekutenda futi.
Ndine iyo yekushanya yakamirira, kune vamwezve vanozivana muGijon. Ngatione kana zvisingazotora nguva yakareba.
Uye zvinoratidzika kwandiri kuti isu tinogovana rudo rweHondo Yenyika II, kuti ini ndine novel yakaiswa panguva iyoyo uye imwe iyo zvakare inowanikwa kumashure.
Basa rakanaka iro raidaidzwa kuti vanotaura nyaya